Shanta xiddig ee Manchester United
Manchester United ayaa horay u shaacisay inay la saxiixan doonto suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan, iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer oo qarka u saaran inuu u dhaqaaqo kooxda Manchester City. Ayaa ah kooxda kaliya ee kahoreysa miiska iyo heerka awood xilli ciyaareedkan.
Red Devils ayaa lagu soo waramayaa inay la soo saxiixan doonto labo ilaa seddex ciyaaryahan oo magacyadooda ay ku qoran yihiin guddiga kooxda, waxaana ay dhaqso u dhaqaaqayaan marka uu furmo suuqa kala iibsiga, laakiin qaar ayaa ka shaqeyn doona inay ka dhaadhiciyaan xitaa hadii uusan aheyn. Suuqa waa xiran yahay.
Ole Gunnar Solskjær ayaa xoojiyay kooxdiisa intii lagu jiray labadii daaqadood ee kala iibsiga ee ugu dambeeyay, iyadoo ciyaartoyda qaar ay dareemayaan horumar, sida Burno Fernandes, laakiin Jadon Sancho, oo ay aad u xiiseynayeen xagaagii ayaa ku guuldareystay inuu soo caga dhigto.
Laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa weli ah mid kamid ah goolasha kooxda, inkasta oo ay jiraan warar toddobaadkan soo jeedinaya oo sheegaya in wax laga beddelayo hamigiisa. Ninka reer Norwey wuxuu kaloo doonayaa difaac si uu u xoojiyo Harry Maguire.
The Sun ayaa magacowday liis shan ciyaartoy ah oo ku jira liiska Solskjær, iyada oo ay weheliso liis ciyaartoy ah oo ay aad ugu baahan yihiin, iyada oo mudnaanta la siinayo sida ay u shaqeeyaan.
Daafaca Bayern Munich David Alaba oo si bilaash ah uga tagi doona kooxda marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa lala xiriirinayaa kooxaha PSG, Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Man City, Liverpool iyo Chelsea.
28 jirkaan oo aan haysan lacag uu ku iibiyo ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo Manchester United oo ah ciyaaryahanka ugu mushaharka badan adduunka isagoo qaata 400 kun ginni isbuucii, laakiin si bilaash ah ayaa lagu heli karaa.
Ciyaaryahanka ayaa ku dhameystay kaalinta shanaad ee The Sun baahida United.
Jadon Sancho, oo ay kula soo saxiixatay Borussia Dortmund aduun dhan 108 milyan oo ginni, ayaa weli diirada u saaran Solskjaer, laakiin xiisaha Ole ayaa hoos u dhacay tan iyo markii Amad Diallo iyo Mason Greenwood ay saxiixeen bishii Janaayo ay muujiyeen inay ka ciyaari karaan booskaas.
Jadon Sancho waa ciyaaryahanka fog ee wargeysyada Manchester United.
Daafaca Real Madrid iyo France, oo lagu soo waramayo in lagu qiimeeyay 44 milyan oo mayl, ayaa ah ciyaaryahanka seddexaad ee loogu jecel yahay kooxda United.
Real Madrid waa inay iibisaa Varane haddii uu ku adkeysto inuusan qandaraaska u dheereynin kaliya 17 bilood oo ka hartay si looga fogaado inuu ka tago xor ah dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Daafaca Sevilla Jules Kounde, oo 22 jir ah ayaa ku jira liiska ciyaartoyda ay dooneyso United, Solskjær ayaana aaminsan inuu ku haboon yahay Varane iyo Alaba.
Waxaa lagu qiimeeyaa 60 milyan oo ginni waana mid ka mid ah daafacyada ugu fiican adduunka haatan.
Weeraryahanka reer Norway Erling Haaland ayaa u soo muuqday mid ka mid ah goolasha ugu muhiimsan ee ay Manchester United u baahan tahay inay la soo wareegto, iyadoo qandaraaskiisa Borussia Dortmund lagu burburin karo sia 65m.
Iyada oo Edinson Cavani aad u gaboobay isla markaana aan mustaqbal ku lahayn Old Trafford, maadaama Anthony Martial aanu ahayn weeraryahan lagu kalsoonaan karo oo Man United ah, isla markaana marka uu Rashford isku rogo xagal ee aanu saaxiib la noqon, tababare Ole Gunnar Solskajer ayaa go’aansaday inuu Real Madrid kula tartamo Real Madrid.
in Libya, the tough remedy of migrants